DataNumen: Inqubomgomo Yokubuyiselwa Imali
Ikhaya Ukubuyiswa inqubomgomo
Siyazethemba kakhulu ngekhwalithi yemikhiqizo nezinsizakalo zethu ukuthi sikunikeza lezi ziqinisekiso ezintathu ezilandelayo kuwe zingakapheli izinsuku ezingama-30 uthengile, ukuqinisekisa ukuthi wanelisekile ngo-100%.
Sinikeza best imikhiqizo yokutakula idatha kanye nezinsizakalo emhlabeni. Kungakho sidale eyethu Khipha ku-internet Isiqinisekiso Sokubuyisela ™ - Siqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu kanye nezinsizakalo zizolulama idatha ephezulu kakhulu kufayela lakho elonakele, isistimu noma ihadiwe. Uma ungathola ithuluzi elingathola idatha engaphezulu kuneyethu, sizobuyisa i-oda lakho ngokugcwele!
Ngemininingwane engaphezulu, sicela uchofoze lapha.
Zama Ngaphambi Kokuthenga Isiqinisekiso
Yonke imikhiqizo yethu ithengiswa ngemodi yokuzama ukuthenga ngaphambi kokuthenga. Lokho wukuthi, ungalanda futhi usebenzise inguqulo yedemo ukuthola kabusha ifayela lakho elikhohlakele, mahhala. Uma ifayili litholakala, inguqulo yedemo izokhombisa ukubuka kuqala kokuqukethwe okutholakele, noma ikhiqize ifayili lokubonisa, noma kokubili. Ngokuya ngemiphumela yenguqulo yedemo, ungazi ukuthi idatha oyifunayo ingatholwa noma cha.
Ngemuva kwalokho, ngemuva kokuthenga okufushane umnyuziki, uma ifayili elilungiswe yinguqulo ephelele lingafani nemiphumela yenguqulo yedemo, sizobuyisela i-oda lakho.
Isiqinisekiso Sokweneliseka se-100%
Yize iziqinisekiso ezimbili ezingenhla zizohlala ziqinisekisa ukuthi uthola okungcono kakhulu futhi most imiphumela yokuthola ngokwanelisayo, siya kwesinye isinyathelo ngokuya phambili, ngokunikeza isiqinisekiso sokwaneliseka esingu-100%. Uma ngasizathu simbe, unganelisekile ngomkhiqizo noma ngenkonzo oyithengile, lapho-ke ungathola imbuyiselo ephelele.
Qaphela: Udinga ukunikeza isizathu sokubuyiselwa kwemali ngemininingwane. Uma kunesidingo, ifayili lokuqala elonakele liyadingeka ngenhloso yokuqinisekisa kuphela. Ifayela lakho nedatha yakho izogcinwa iyimfihlo eyi-100%. Bona okwethu Inqubomgomo yobumfihlo ukuthola eminye imininingwane. Uma kunesidingo, sizosayina i-NDA nawe ukuqinisekisa lokhu.